China WIK9070 Wheel Excavator Manufacturer na Ngwaahịa | Wilk
WIK 9070 Ebe ire ere
· Domesticlọ ọrụ ụlọ ama ama ama ama nwere ikike siri ike ma zute ihe achọrọ iji rụọ ọrụ nke ọma.
· The kpọmkwem kenha imewe na elu ike na-azọpụta akara ime ka igwe mmanụ ụgbọala oriri obere.
· Ojiji nke ndị na-agba ume ọhụrụ na ndị na-agba nkịtị na-eme mkpọtụ nke igwe;
· Ptmejupụta teknụzụ turbocharging dị elu iji mee ka igwe dị na mbara ala kwalite;
· Ihe mkpuchi pụrụ iche nke nwere ụdị ọgbara ọhụụ na-eme ka nri ikuku nke injin na-abawanye nke ukwuu yana ike nke sistemu iji gbasasịa ọkụ, na-eme ka ọrụ igwe na-aga n’ihu na ịrụ ọrụ nke ọma.
· Advanced haịdrọlik usoro
· Nhazi dị elu: Igwe mgbapụta bụ isi, valvụ isi, moto rotary, moto na-aga ije, cylinder, valve pilot na ihe ndị ọzọ bụcha akara ama ama mba ụwa iji hụ na ngwaahịa dị mma.
· Mee ka nsonaazụ nyocha kachasị ọhụrụ, belata ike oriri, melite nhazi, ma zaghachi ngwa ngwa.
· Nchịkwa ntụgharị dị ike na nke ziri ezi: Mee ka njirimara vibration dị mma iji hụ na ọrụ nkwụsị na-akwụsịtụ ziri ezi ma kwụsie ike; site na ịbawanye torque idobere, igwe na-enye ike dị ike ntụgharị usoro;
· Sịlịnda nwere ọrụ nchekwa: boom cylinder na cylinder na-arụ ọrụ, a na-eji bọket na-echekwa ya, nke nwere ike belata igwe vibration na mmetụta, belata mkpọtụ ma gbatị ndụ ndụ.
· Teknụzụ njikọta mgbapụta ugboro abụọ: mee ka ọnụọgụ nke isi valvụ na-agagharị na cylinder ọ bụla nke ọganihu, mkpisi na ịwụ iji mee ka ọsọ ọsọ na-arụ ọrụ.
Jupụtara na nkume na inogide High pụrụ ịdabere
Chassis mesikwuru, haịdrọlik ike sterịn, wheel deceleration axle, melite mgbanwe na anwụ ngwa ngwa nke igwe.
Akụkụ dị mkpa ndị dị mkpa nke mkpisi ahụ na-eme ihe owuwu ahụ, nke pụrụ ibelata nrụgide ma melite ịdịte aka site n'ịgbanwe ọdịdị na ọkpụrụkpụ nke efere ahụ.
A na-agbanye ọganihu ahụ ma na-akpụzi ya, ma n'ikpeazụ, igwe na-agwụ ike na-agwụ ike, a na-arụkwa ehi ahụ, nke nwere ike iwusi ike nke nnukwu na obere ogwe aka aka, mee ka ọrụ nke ntụtụ na aka uwe dị ogologo, si otú a na-ezere ịgbado ọkụ. mgbaji ọkpụkpụ na ịgbado ọkụ mgbe, na bụ inogide.
· A na-eji efere ịwụ bọket mee nke efere ígwè pụrụ iche na-eguzogide ọgwụ, nke kwesịrị ekwesị maka arụmọrụ dị arọ, ma nwee ezé ịwụ na-eguzogide ọgwụ na ezé akụkụ iji melite arụmọrụ nke igwe.
· Iji thickened nchara efere na-agbakwunye akụkụ mkwado efere ka mma eyi eguzogide;
· Iji bọket dị larịị, ebe mkpochapu ahịhịa dị mma n’anya ma dịkwa mma mgbe ị na-akwụnye ya.
· Andmụbawanye ọhụụ nke ọhụụ n'akụkụ niile, mee ka windo dị n'ihu, windo dị n'akụkụ na windo dị n'azụ iji hụ na ọhụụ nke ọhụụ, belata oke ntụpọ, ma rụọ ọrụ nke ọma na nke ọma.
· Mee ka iko enyo mbara ahụ dịkwuo elu iji melite ọhụhụ elu ma mee ka ikuku dị elu. A na-eji iko siri ike maka ọnụ ụzọ na windo gbochie ìhè anyanwụ;
· A na-ahazi njikwa ọrụ niile ma hazie ya dị ka teknụzụ ergonomics si dị.
· Ndị na-arụ ọrụ ahụ dị mfe ịchịkwa.
· Okomoko n'ime-juru n'ọnụ cab, LCD ngosi panel, okomoko oche.
· Wụnye igwe ikuku na ikuku dị ọkụ iji hụ na ime ụlọ na ime ụlọ ngwa ngwa
Ọgụgụ isi na ngosipụta
· LCD nyochaa ọtụtụ ọrụ na nnukwu ihuenyo, ihe ngosi dijitalụ, nlekota nyocha nke ọnọdụ ọrụ nke engine (ntụgharị ntụgharị, mmiri ọkụ, nrụgide mmanụ, wdg), enwere ike ịjụ ajụjụ gbasara ọrụ dị iche iche nke igwe n'oge ọ bụla.
· Ọrụ switches na-centrally mere ndokwa na akara obubọk na pụrụ n'ụzọ dị mfe họrọ site aka bọtịnụ.
· Iji GPS satellite n'ọnọdu usoro, remote nchoputa, kpatara ịdọ aka ná ntị, mmezi na akpaka ncheta.
Adaba na ngwa ngwa idozi na ịrụzi ,,,,,,,,,,,
· The mmanụ nyo, pilot mmanụ nyo, mmanụ mmanụ nyo, na mmanụ-mmiri separator arụnyere na ebe nwere ike jikọọ na ala maka nnyocha na nnọchi.
· Nnukwu mmanụ ụgbọ mmiri buru ibu maka ịrụ ọrụ ogologo oge.
· Nnukwu igbe ngwaọrụ dị mma na nchekwa nke ihe ndị ọzọ.
· Ogologo ndozi na ndozi okirikiri: họrọ akụkụ dị elu na akụrụngwa iji gbatịkwuo ọrụ ọrụ ma belata oge mmezi nke igwe.
WIK 9070 Àkpụrụ ụkpụrụ
Modeldị ihe atụ: WIK9070 Wheel Excavator
Izu ike (m³Nwunye: 0.21
Na-agbanye ọsọ ọsọ (RMP): 0-12
Oke ịrị ugwu (°): 25
Ike igwu ala nke ịwụ (KN): 45
Oke igwu ala nke osisi (KN): 36
Dị njin: YC4DK85
Ike / ọsọ (KW / rmp): 62.5 / 2200
Dị Taya: 8.25-16
Nrụgide usoro (MPa): 20
Oke igwu ala dị elu (mm): 6245
Oke ebutu elu: 4630
Oke igwu ala omimi (mm): 3820
Oke ikuku na-egwu ala (mm): 2700
Kachasị igwu ala okirikiri (mm): 6360
Opekempe na-atụgharị okirikiri (mm): 2450
Oke kachasị ala nke bulldozer:（mm）: 310
Oke kacha mikpuo omimi nke bọlldozing osisi (mm): 130
N'ozuzu akụkụ ogologo * obosara * elu (mm): 6300 * 2205 * 2850
Ogo dị elu (mm): 2850
Ọkpụkpụ ụkwụ (mm): 2400
Uzo (egwu) anya (mm): 1675
Opekempe nwechapụ (mm): 260
Redio nke ọdụ gyration (mm): 1940
Ndị na-egwupụta ụkwụ ụkwụ na-adị mfe ịkwaga. A na-ejikarị ha eme ihe maka obere ọrụ na obodo ma jiri ya mee ihe maka ọchịchị obodo. Arụ ọrụ na ebe dị nro dị nro. Wheeldị ụkwụ ụkwụ na-arụ ọrụ na ala ciment na ahịhịa, na n'ozuzu anaghị emebi elu okporo ụzọ. Egwuregwu bụ ngwá ọrụ nke oru ngo a, nke nwere ike ịkụpịa ụzọ ahụ. Ebumnuche ebumnuche nke ndị na-agba ụkwụ ụkwụ abụghị nke crawler. Ojiji nke ndi na-acho ugbo ala na-emetụta gburugburu ebe obibi ma nwee oke ike. Ọ nwere ike rụọ obere ọrụ. Ndị na-egwupụta Crawler nwere ike ịmalite ọrụ ọ bụla ma ọ bụ gburugburu ebe obibi.
Wheeled excavator bụ igwe na-egwupụta ihe nke nwere taya dị ka akụkụ na-eje ije, nke a na-ezo aka dị ka onye na-egwupụta wiil. Igwu ugbo ala nwere ọsọ na-agagharị ngwa ngwa, anaghị emebi ụzọ n'okporo ụzọ, nwere ike ịfefe n'onwe ya n'ebe dị anya, ọ nwere ike dochie ngwa ngwa dị iche iche ngwa ngwa. Ọsọ kachasị njem nke ndị na-egwupụta ụkwụ ala ndị ọzọ na-abụkarị 25-40km / h, na ọtụtụ ndị ụlọ bụ 20-35km / h. Ọ bụ ezie na arụmọrụ ọrụ nke igwu ala adịghị mma dị ka nke igwu ala crawler, ma e jiri ya tụnyere ego mbufe dị oke ọnụ nke igwu ala, igwu ala nwere uru akụ na ụba mgbe ị na-agbanwe saịtị ugboro ugboro. Ọ bụ kpomkwem n'ihi ọdịdị ya dị iche iche nke agagharị, mgbanwe, na arụmọrụ ka a na-ejikarị gwupụtatị ụkwụ ebe a na-egwupụta na mwepụ nke ihe ndị dị ka ọrụ mmezi nke ọchịchị obodo, nnukwu ụzọ njem njem na mmezi ngwa ngwa.
Isi ihe eji eme ihe eji eme ihe na hydraulic wheel excavator bu ihe oru, ihe eji eme ihe, ihe ndi mmadu, ihe di ike, ihe ngbanye uzo, uzo na ihe inyeaka. N'ime ha, a na-arụzi tagzi, igwe ike, yana ngwa inyeaka na ntanetị zuru oke, nke a na-akpọkarị ntụgharị dị n'elu. Chassis nke taya ahụ bụ etiti, nkwado, gearbox, igwe eletriki, ihu na azụ azụ, taya, wdg, ma jikọtara ya na ahụ na-agbagharị. Ngwaọrụ na-arụ ọrụ bụkarị mbido, mkpisi, ịwụ, mkpanaka njikọ na akụkụ ndị ọzọ. Dịka usoro ọrụ ya, bọket nwere ụdị dị iche iche dịka shọvel dị n'ihu, azụ azụ, draịva na shọvel jidere. Ọganihu a na-enwekarị gooseneck ihe na-ehicha ụdị na hydraulic gbawara n'etiti ọtụtụ ngalaba. A na-ejikarị ụyọkọ ọtụtụ akụkụ nke ịwụ azụ azụ na ngwaahịa ndị si mba ọzọ.
Nke gara aga: WIK9085 Wheel Excavator
Osote: WIK9088 wiil Excavator